Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Ny teti-bolan'ny fizahan-tany any Odisha India dia nahita fiakarana tsy mbola nisy toa azy
Ny minisitry ny fizahan-tany ao Odisha, governemanta Jyoti Prakash Panigrahi, miaraka amin'ny minisitry ny fizahan-tany amin'ny fiteny Odia, literatiora ary kolontsaina Odisha, Andriamatoa Jyoti Prakash Panigrahi, dia nanambara anio sabotsy 12 jona 2021 fa raha mbola tao amin'ny tetikasan'ny governemanta momba ny zavatra, ny fizahantany dia mety ho ambany kely kokoa noho ireo sehatra laharam-pahamehana hafa toy ny fahasalamana sy ny fanabeazana, sehatra iray lehibe io izay tsy maintsy tohanana.
Niresaka tamin'ny latabatra boribory virtoaly amin'ny "COVID-19: Fiantraikany amin'ny sekta fizahan-tany an'ny fanjakana" nokarakarain'ny FICCI, Andriamatoa Panigrahi dia nilaza fa ny tetibola natokana ho an'ny sehatry ny fizahantany tamin'ity taona ity dia nahita fiakarana tsy mbola nisy toa azy.
Ny lehiben'ny minisitra dia te handray ny fizahan-tany Odisha amin'ny fenitra manerantany.
Hoy izy: "Tokony ho fantatsika rehetra fa mila fanampiana ny sehatra mba hiverenana."
Antenaina tsy ho ela ny praiminisitra hanambara fonosana ara-bola ho an'ny sehatry ny fizahan-tany. "Ny filàna dia ny hiasa mankany amin'ny fizahan-tany maharitra, ary tsy afaka manana toe-javatra izay tsy hikarakarana ny fitantanana risika isika," hoy ihany izy.
"Andao hiara-manamafy ny fahavononantsika hitandrina ny fahefana ary hampiroborobo ny lafiny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny hahatonga azy io haharitra amin'ny lafiny sosialy sy toekarena," hoy Andriamatoa Panigrahi.
Andriamatoa Vishal Kumar Dev, sekretera lehibe an'ny Serivisy ho an'ny fanatanjahantena sy ny tanora ary ny fizahan-tany ho an'ny governemanta Odisha ao India, nilaza fa fantatry ny governemanta ny ahiahy atrehan'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny. "Izahay dia miasa amina fonosana fanohanana amin'ny antsipiriany hatolotra ny indostria, izay ahitàna hotely, trano fisakafoanana, mpandraharaha fizahan-tany, ary olona miasa irery ao anatin'izany ny mpaka sary, mpitari-dalana, sns., Ankoatry ny hafa," hoy ihany izy.
Manasongadina ireo fepetra hampiroboroboana Fizahan-tany Odisha, hoy izy fa mijery sori-dalana izahay, fitsangatsanganana an-dalambe avy amin'ny fanjakana mpifanila vodirindrina amintsika, ary ny fananganana fiakarana tontolo iainana hahafantarana toerana maro kokoa. Nifantina mpiara-miasa izahay izay hanampy anay amin'ny fikarakarana ny làlan-kizorana isan-karazany sy ny fonosana traikefa mitroka mba hampiroborobo ireo fonosana ireo, hoy Atoa Dev.